Soo dejisan SHAREit 4.0.6.177 – Windows – Vessoft
SHAREit – software ah in ay is dhaafsadaan xogta u dhexeeya kombiyuutarada iyo qalabka. software The qabata gudbinta oo ka mid ah sawiro, audio, video iyo files kale isticmaalaya-Wi Fi. SHAREit abuuraa shabakad wireless si toos ah in ay is dhaafsadaan xogta u dhexeeya qalabka badan ama kombiyuutarada oo bixiya kala iibsiga file ammaan ah. feature ugu weyn ee software-ka waa awooda si ay u gudbiyaan files badan oo ay isticmaalaan lacagta aan xad lahayn of gaadiidka lug. SHAREit leeyahay interface a fudud oo dareen leh.
kala iibsiga xogta Fast iyo ammaan
Exchange of files of noocyada iyo tirada kala duwan
Exchange xogta u dhexeeya qalabka duwan oo isku mar